Wednesday July 17, 2019 - 18:02:35 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa waxaa Maanta kulankii ugu horeeyay ku yeeshay Guddoomiyaha Cusub ee Gobolkaas iyo Hay'addaha gargaarka ee ka howlgala deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan kuwa ku sugan Baladweyne.
Kulanka ayaa waxaa Shir Guddoomiyay Guddoomiyaha Cusub ee Gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale,isla markaana waxaa goobjoog ka ahaa inta badan Hay’addaha gargaarka ee ka howlgala Magaaldaas iyo Mas’uuliyiin ka tirsan Gobolka iyo kan Baladweyne.
Ujeedka kulanka ayaa waxaa uu mid isbarasho furan ah iyo sidii labada dhinac ay wadashaqeyn ay u dhexmari laheyd,kadib markii dhawaan xilka uu la wareegay Guddoomiye Caraale.
Cali Maxamed Caraale Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan oo kulan markii uu soo dhaafay,kadib warbaahinta la hadlay ayaa waxaa uu sheegay in Hay’addaha gargaarka iyo maamulka ay ka wada hadleen sidii loogu adeegi lahaa Bulshada reer Hiiraan,isla markaana loo siin lahaa waxkasto oo ay baahan yihiin sida Waxbarashada, Caafimaadka,Biyaha iyo arrimo kale.
Guddoomiye Caraale ayaa Hay’addaha ugu baaqay in gargaar deg deg ah gaarsiiyaan dadkii ku Barakacay dagaal Beeleedyadii dhawaan ka dhacay deegaano hootaga Degmooyinka Matabaan iyo Maxaas ee Gobolka Hiiraan.
Qaar ka mid ah Mas’uuliyiinta Hay’adaha uu la kulmay ayaa dhankooda waxaa ay balan qaadeen inay si huufan ugu adeegi doonaan Shacabka ku dhaqan deegaanada Gobolka Hiiraan ee Maamulka Hir-Shabeelle.
Waa kulankii ugu horeeyay ee uu shir Guddoomiyo Guddoomiyaha Cusub ee Gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale,kaasi oo dhawaan xilka si rasmi ah ula wareegay.